ဖူးနုသဈ: သီတငျးကြှတျတော့ ဘာဖွဈလဲ
Posted by ZT at 12:08 AM
ထိုင်ဝမ်ကကောင်မလေး လိပ်စာလေး မစပါခင်ဗျာ...
သီတင်းကျွတ်တော့ လူကြီးသူမတွေ စီနီယာတွေကို လိုက်ကန်တော့ရမှာပေါ့..
ဒီမှာတော့ တစ္ဆေလ (တရုတ် ၇လပိုင်း) ကို
ဒီရကျပိုငျးမှာ အဲဒီ့ဟာလာပွောရငျ စိတျအဆိုးဆုံးပဲ ဘယျနှယျ့ စူပါမားကကျ သှားဝယျသလို ယူလို့ရတဲ့အမြိုးမှမဟုတျပဲ :P
မပေါက် နဲ့ မကျော့ -> မကြာခင်ပေါ့။ အဟဲ။ :D
‘ကျမကို လက်ရှိအခြေအနေအတိုင်း ရှင်လက်ခံနိုင်သလား’ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ
- My money is my money, your money also my money.
- My money is my money, your money is your money.
- OK you take care to me don’t take care about my money.
- 50:50 ဆိုတာတွေ စဉ်းစားဦး။
‘ရှိတာတွေ အကုန်လုံးယူ’ ဆိုတဲ့ခေတ်တော့ မရှိသလောက်ပဲ။
အော....ကိုZT မရသေးတာ..မယူသေးလို့ လို့မှတ်သားသွားပါသည်..၊
++++ - +++++ = ?????????????
Is that post defensed yourself? :)
အခုမှ ဖတ်မိတယ်... ရေးထားတာကို ကြိုက်လိုက်တာ... ခေါင်းစဉ်ကအစ...
သီတင်းကျွတ်တော့ ဘာဖြစ်လဲ တဲ့...း))
ဒီပိုစ့်လေးဖတ်ပြီး သဘောကျလို့ အသံထွက်အောင် ရယ်မိသေး
အိမ်ထောင်ရှိတဲ့သူတွေက သီတင်းကျွတ်တာကိုဘဲ စကားထဲ ထည့်ပြောနေကြတယ်
တကယ်တမ်းက သူတို့ကိုယ်တိုင် နောင်တရနေတာကိုတော့ လူသိမခံကြဘူး
လူအထင်ကြီးအောင် ခပ်တည်တည်နဲ့ မယူသေးဘူးလား ဘာညာ လုပ်နေကြတာ..
အတွင်းစိတ်က ပြန်အမ်းချင်နေတာ ခိခိး)
ကို ZT ရေ..။ အဲဒါ မြွေတွေဗျ။ ကျွန်တော်တော့ သီတင်းမကျွတ်ခင်လေးတင် တွင်းထဲဆင်းကြည့်တာ။ တကယ်ပြောတာ...။